TSheets အချိန်ကိုခြေရာခံ | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » TSheets အချိန် Tracker
TSheets သည်သင်၏အခြေခံ ၀ န်ထမ်းများအားသူတို့၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ထည့်ထားသောကိရိယာများဖြင့်အလုပ်ခွင်မှထွက်ရန်နှင့်ထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည့် cloud-time time tracking and scheduling app ဖြစ်သည်။ တိကျမှန်ကန်သော၊ အီလက်ထရောနစ်အချိန်အချက်အလက်များသည်စက္ကူဇယားများကိုအစားထိုး။ လုပ်ခလစာနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ နှင့်လျော့နည်းအကုန်အကျ။ TSheets သည်အချိန်နှင့် GPS အချက်များ (ဆဲလ် (သို့) အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိသည့်တိုင်) များကိုလည်းတိကျစွာခြေရာခံပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပြန်ရောက်သည့်အခါအလိုအလျောက်စည်းညှိသည်။
“ Who's Working” အင်္ဂါရပ်ဖြင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်နှင့်မည်သူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ TSheets တွင် in-app Scheduling ပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားဆိုင်းဆွဲခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ မည်သူကြည့်နေသည်ကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်အတိုင်းပြောင်းရန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့အားခွင့်ပြုသည်။
•ရွေ့လျားနေသည့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း - နာရီ ၀ င်ထွက်၊ အလုပ်ကုဒ်ပြောင်းခြင်း၊ အချိန်ဇယားကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အချိန်ဇယားအပြောင်းအလဲများကိုကြည့်ပါ၊
သင်၏ back office ကိုရိုးရှင်းစေရန် QuickBooks, Square နှင့် Gusto ပေါင်းစပ်မှုများ (နှင့်ပိုမို!)
• In-app scheduling သည် ၀ န်ထမ်းများအားသတ်မှတ်ထားသောအလုပ်များ (သို့) အဆိုင်းများတွင်အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
• ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ န်ထမ်းများ ၀ န်ဆောင်မှုများပျက်ကွက်သည့်တိုင် (နာရီနှင့်ဆိုင်သော GPS လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း (geofencing အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အခြားရွေးချယ်စရာ!) ။
• ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာသို့မရောက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ပိုကန့်သတ်ချက်များသို့ချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိပါက Push, text & email သတိပေးချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
•စုစုပေါင်းလုပ်ခလစာကုန်ကျစရိတ်များပေါ်တွင် 2-8% ကိုသိမ်းဆည်းပါ
• QuickBooks Online နှင့် PC အတွက် QuickBooks (Pro, Premier, & Enterprise) နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်း
•လူကြိုက်များသောလုပ်ခလစာ၊ စာရင်းကိုင်၊ ငွေတောင်းခံလွှာဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
•အစွမ်းထက်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် (PDF၊ CSV၊ အွန်လိုင်း၊ HTML)
• DCAA / DOL လိုက်နာမှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုများ
ဤအချိန်သည်အလိုအလျောက်ခြေရာခံနိုင်ရန်နှင့်စီစဉ်ရန်အတွက် app သည် TSheets အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုအပ်သောအခမဲ့ရုံးအတွက်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုအက်ပ်တွင်သို့မဟုတ် https://www.tsheets.com တွင်ယခုစာရင်းသွင်းပါ။ (သို့မဟုတ်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် 1 အသုံးပြုသူသာလျှင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ )
TSheets သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်း၊ အီးမေးလ်နှင့်ချက်တင်အထောက်အပံ့ကိုပေးထားသည်။ မေးခွန်းရှိလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါသည်
ဖောက်သည်သုံးသပ်ချက်များ - tsheets.com/reviews
DIY အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့: http://help.tsheets.com
Webinars - TSheets များကိုအခမဲ့အပတ်စဉ် webinars ကို http://www.tsheets.com/webinars တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
• ၀ န်ထမ်းနာရီများကိုတိကျစွာအချိန်နှင့်တပြေးညီ virtual time နာရီနှင့်တိကျစွာခြေရာခံပါ
• ၀ န်ထမ်းများသည်အချိန်ကာလမှစပြီး A ဆိုင်းအသစ်များနှင့်အလုပ်သစ်များသို့ A လုပ်ခံလိုက်ရသည်
•အဆင့်များစွာရှိသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ စီမံကိန်းများ၊ တည်နေရာများ၊
your သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည် GPS လမ်းကြောင်းဖြင့်မြေပုံမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကြည့်ပါ
Drag-and-drop shifts များဖြင့်အချိန်ဇယားတစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ
•သင်၏အချိန်ဇယားကို Apple iCal၊ Microsoft Outlook သို့မဟုတ် Google Calendar နှင့်စည်းညှိပါ။
•အသိပေးချက်များသည် ၀ န်ထမ်းများအားအချိန်ဇယားအသစ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်ဝေသည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြောင်းသည်ဖြစ်စေသိစေနိုင်သည်
• ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်တစ်ခုသို့အချိန်မရွေးသို့မဟုတ်အစီအစဉ်အတိုင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိပါကအကြောင်းကြားစာများရယူပါ
• ၀ န်ထမ်းများနှင့်မန်နေဂျာများကိုကန့်သတ်ချက်ရှိသောချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်အသိပေးရန်အချိန်ပိုသတိပေးချက်များကိုသတ်မှတ်ထားပါ
•မည်သူအလုပ်လုပ်နေသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ပင်အဆင်ပြေသော dashboard မှမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကြည့်ပါ
• ၀ န်ထမ်းများ A တွက်အနားယူခြင်း၊
• ၀ န်ထမ်း၊ အလုပ်၊ ၀ ယ်သူသို့မဟုတ်တည်နေရာအလိုက် ၀ န်ဆောင်မှုနာရီကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်
•မြေပုံနှင့်အတူ timer နေရာမှာသမိုင်းကိုကြည့်ပါ
PLUS သည်ဝဘ်ဒိုင်ခွက်ကို သုံး၍ မန်နေဂျာများက -
• PTO၊ အားလပ်ရက်နှင့်ခွင့်ကိုစီမံပါ
•ပြောင်းကုန်ပြီ differential ကိုစီမံခန့်ခွဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ၊ bug fixes နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများဖြင့် TSheets ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသည်။ သင့်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိရန်သေချာစေရန်အလိုအလျောက်မွမ်းမံချက်များကိုဖွင့်ပါ။ help@tsheets.com သို့ ဆက်သွယ်၍ မည်သည့်ပြissuesနာမျိုးမှသင်ကြုံတွေ့နေရပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
TSheets အချိန် Tracker
7.76 ကို MB
7shifts န်ထမ်း ...
အလုပ် Log in ဝင်ရန်